Smartphone | TeraNews.net |
Ny fampiroboroboana ny fampiraisana ny connecteurs ho an'ny finday sy takelaka any Eropa sy Etazonia dia mametraka tsindry mafy amin'i Apple. Noho izany, efa amin'ny 2022 ...
Tamin'ny alin'ny fialantsasatry ny taom-baovao, ireo mpanamboatra finday dia nanondraka ny tsena tamin'ny tolotra mahaliana amin'ny sokajy vidiny samihafa. ...
Ao anatin'ny vanim-potoana manomboka amin'ny 11 ka hatramin'ny 12 Novambra 2021, ny mpankafy ny marika Xiaomi rehetra dia manana fahafahana hividy fitaovana amin'ny fihenam-bidy ary hahazo tombony ...
Ny marika Sharp dia tsy te hisotro ronono. Ny fihenan'ny varotra tamin'ny taona 2020 dia nitarika fanavaozana lehibe tao amin'ny orinasa. Ary 2021...
Ny taranaka tanora dia tsy nanam-potoana hisambotra ireo fotoana mahafinaritra izay nanana rafitra modular ny finday. Azo natao ny niova...
Xiaomi 11 Lite NE - mpamono finday avo lenta amin'ny kilasy tetibola
Mbola mieritreritra ihany ve fa ny finday avo lenta ambany dia ambany amin'ny sokajy tetibola? Fiovan'ny fotoana. Nanapa-kevitra ny Xiaomi fa ...
Xiaomi Mi 11T - ny vidiny tsara indrindra sy ny fahombiazana mendrika
Ny Xiaomi Mi 11T vaovao dia milaza fa hanaisotra ny mpifaninana rehetra amin'ny ampahany sarany takatry ny fampiratiana. Nahavita nanatanteraka ...
Xiaomi Mi 11T Pro dia smartphone finday avo lenta
Ny tianay ny marika sinoa Xiaomi dia ny fahamarinany amin'ny mpividy. Manaraka hatrany ny fotoana ny orinasa, ...
Nanao dingana iray i Alemana manohana ireo tompona smartphone
Hain'ny Alemanina ny manisa vola ary manandrana mandany izany amin'ny fomba mazava. Io no antony voalohany nanoratana ny lalàna fametrahana vaovao ...
Iza no nilaza fa tsy tian'ny mpividy fiara mifono vy amin'ny tsenan'ny finday? Mifanohitra amin'izany no ilofosan'ny olona hatanjaka sy haharitra ...
Apple iPhone 13 dia haseho amin'ny besinimaro amin'ny 24 septambra 2021. Ny vaovao tsara indrindra dia ny mpanamboatra tsy ...
Ireo mpivarotra teknolojia finday dia mahalana no manondro amin'ny famaritana ny fisian'ny sensor manivika amin'ny finday avo lenta. Matetika izy ireo dia voafetra amin'ny anarana ...
Smartphone Xiaomi POCO X3 GT amin'ny $ 299
Xiaomi dia manamboatra indray ny tsenan'ny teknolojia finday amin'ny lafiny famaritana sy ny vidiny. Voafaritra ny mari-pamantarana - ...
Nokia XR20 miaraka amin'ny fiarovana IP68 - niandry ihany tamin'ny farany
Fotoana mahafinaritra ho an'ireo mpankafy ny marika Nokia. Ny orinasa dia nanangana ny fiara mifono vy Nokia XR20 miaraka amin'ny fiarovana IP68. Mpanamboatra…
AV-receiver Denon AVR-X3700H - topimaso, endri-javatra
Fandefasana feo - fivarotana mangatsiaka sa spam?
Google Pixel 6 sy Pixel 6 Pro eny an-dalana (Fahalavoana 2021)
Xiaomi Redmi 1A monitor dia $ 85: fividianana mahaliana